Madaxweyne Farmaajo “Dowladda Federaalka ah waxay dadaal dheer gelisay xasillinta deegannada Galmudug”. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Madaxweyne Farmaajo “Dowladda Federaalka ah waxay dadaal dheer gelisay xasillinta deegannada Galmudug”.
Madaxweyne Farmaajo “Dowladda Federaalka ah waxay dadaal dheer gelisay xasillinta deegannada Galmudug”.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo munaasabad soo dhaweyn ah u sameeyey Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa sheegay in ay ku faraxsanyihiin socdaalka dib u heshiisiinta ee uu ku marayo Madaxweyne Farmaajo Gobollada dalka.
“Madaxweynaha inta uu nala joogay waxaan uga warbixinnay xaaladda guud ee gobollada, annagoona u gudbinay baahiyaha jira. Runtii muhiimad weyn ayuu noo leeyahay socdaalkaaga Madaxweynaha.”
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in heshiiska dhawaan lagu mideeyey dhinacyada Galmudug uu ka tarjumayo hiigsiga Dowladda Federaalka ah ee ku aaddan Galmudug oo xasilloon ka jirto, dadkeeduna nabad iyo horumar gaareen.
Munaasabadda soo dhaweynta ah waxaa ka soo qeyb galey Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ee Golaha Aqalka Sare Mudane Abshir Maxamed Axmed, Wasiirro, xildhibaanno heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed ah, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kale ee bulshada.
Dhanka kale, Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa oo ay wehelinayaan Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa waxaa marti qaad ugu sameeyey goob beer ah oo 45 Km ka jirta waqooyiga magaalada Gaalkacayo waxa ayna halkaasi kula kulmeen Islaan Bshiir Islaan Cabdulle Islaan Faarax oo ka mid ah duubabka dhaqanka Soomaaliyeed.
Sidoo kale, waxaa marti qaadkan mid lamid ah u sameeyey Madaxweynaha iyo wafdigiisa Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdulqaadir.
Previous articleTaabid oo si weyn loogu soo dhoweeyey Dhuusamareeb
Next articleXildhibaanno iyo maamulka G. shabeellada Hoose oo booqdey Qoryooley